समय बुझ्न नसक्दा पराजय ः भण्डारी::Best News Experience from Nepal
समय बुझ्न नसक्दा पराजय ः भण्डारी
बुटवल, पुस । चन्द्र भण्डारी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि खरो बोल्ने नेताका रुपमा परिचित उनी गुल्मी १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भए । यसअघि पराजित गरेका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीसँग पराजयको स्वाद चाखेका उनी कांग्रेसलाई नयाँ बाटोमा लगेर मात्रै कांग्रेस पुनः राजनीतिमा सफल हुने बताउँछन् । चुनाबपछि गुल्मीबाट काठमाडौं जानेक्रममा बुटवल आएका भण्डारीसँग राजनीतिक उतारचढाव र कांग्रेस के गर्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा आचार्य प्रदीपले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
अघिल्लो संविधानसभामा जितेका व्यक्तिसँग अहिले हार्नुभयो । यसको समीक्षामा के पाउनुभयो ?
समाज राजनीतिकरण भएको छ । समाज विकासमा भन्दा पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित बनेको छ । हाम्रो क्षेत्रमा माओवादी र जनमोर्चासँग एमाले मिल्नु भनेको बहुमत पहिले नै ल्याउनु जस्तै हो । जनता विकास र दृष्टिकोणको आधारमा परिणत हुन अझै सकेका छैनन् । यसले गर्दा कम मत आएको हो । र, यसलाई मैले राम्रो तरिकाले नै स्वीकारेको छु ।
परिणाम गठबन्धनको हिसाबले स्वभाविक थियो ?
गठबन्धन भएपछि मैले चुनाव जित्छु भन्ने मलाई थिएन । यो कुरा मैले पहिले नै भनिसकेको थिएँ । तर गठबन्धन भएको बेला म निर्वाचनमा उठ्दिन भनेर भाग्नु राम्रो कुरा थिएन । मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ कि मैले हार बेहोर्नु प¥यो भने पनि अर्को खोज हुनेछ मेरो लागि । म गाउँमा डुलेँ । जनताका कुरा सुनेँ । समस्याका बारेमा पहिलेभन्दा बढी जानकारी पाएँ । अन्तरक्रिया गरेँ । यसबाट म सोधपत्र तयार गर्नेछु । एउटा सोधपत्र मैले तयार पारिरहेको छु र अब अर्को पनि तयार पार्छु । जुन नतिजाको कुरा छ, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एमालेसँग मिलेर संविधान जारी गरेको हो । कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान जारी गरेको हो । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । चुनाव त आउँछ जान्छ नि । हारजित ठूलो कुरा हैन ।
तपाइँले मत माग्दा विभिन्न योजनाहरुका बारेमा बताउनुभएको छ, ती योजना अब कसरी अघि बढ्लान् ? तपाइँको भूमिका के हुन्छ ?
मैले नेपाली समाजलाई राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले हेर्छु । आयु छोटो छ र त्यसको प्रयोग अत्याधिक गर्नु पर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई । गुल्मी मेरो जिल्ला हो । मैले समृद्ध बनाउँछु । ४ वर्षमा ४२ वटा पूल बनेका छन् । यो नेपाल त के अन्य कुनै देशमा पनि निर्माण हुन सक्दैनन् । ९३ वटा खानेपानी योजना ल्याएका छौँ । ती काम मैले सुरु गरेँ । अहिले मेरा मित्र प्रदिप ज्ञवालीले जित्नु भएको छ । हामीले विमानस्थलको काम पनि शुरु गरेका होँ । उहाँको समयमा २३ लाख आउने बजेट हाम्रो पालामा ६ करोड आएको छ । विमानस्थलका ठेकेदार तथा कर्मचारी उहाँका निकटतम मित्रहरु रहेका छन् । उनीहरुले यो कार्यलाई दुहुनो गाईको रुपमा लिएका छन् । तर ज्ञवालीजी एउटा ईमान्दार नेता हो । उहाँले यो विषयमा अलि गम्भीर हुन जरुरी छ । उहाँलाई प्रयोग गरेर अरु कसैले गलत ढंगले फाईदा नलेओस् ।
कांग्रेसको देशव्यापी नतिजा बिग्रेको छ, कसरी हेर्नुभएको छ ?
वाम एकैठाउँ हुँदा कांग्रेसले हार्छ भन्ने मानसिकता सबै जनतामा पर्न वाम गठबन्धन सफल भयो । योसँगै यसको पछाडि अदृश्य शक्ति के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पनि आवश्यक छ । समय अनुसारको चाहना हो । त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ र पछाडि प¥यौं । कांग्रेसले भारतले गरेको नाकाबन्दी पछाडि र शुशील कोईराला प्रधानमन्त्रीमा पराजित भएपछि नै हार्न सुरु गरेको हो । यो नै हाम्रो मुख्य कमजोरी हो । हामीले बेलैमा सोचेनौं र यो नतिजा आयो ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व असफल भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले यही नै भन्न खोजेको होईन । म पनि केन्द्रीय सदस्य नै हुँ । यसो भन्दैगर्दा पनि यो कुराको जिम्मेवार म पनि हुन आउँछु । चुनावमा हामीले भोगको पराजयलाई हेर्दा नेतृत्वको कमजोरी मैले देख्ने होईन जनताले पनि देखेको छ । जनताले के हो भन्ने बुझेकै छन् नि । सबैतिर हारेपछि कसको कमजोरी भयो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि ।
कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठ्न थालेको छ । के नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समय आएको हो ?
नेतृत्व असफल भयो भनिरहेको कुरा सबैले सुनेका छौं । यो बाहिर भन्दै हिडेर नेतृत्व परिवर्तन पनि हुँदैन । केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ र त्यहाँ कुरा हुन्छ । त्यहाँ एजेन्डाको रुपमा यो कुरा प्रवेश गर्छ । हामी समीक्षा गर्छौं । युवामा नेतृत्व चाहियो भन्ने कुरा पनि सुनिएका छन् । तर तत्काल कसलाई नेतृत्व दिने ? को हो सक्षम भन्ने कुरा नै हामी समीक्षा गर्न बाँकी छ । हामी यी सबै कुरा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट टुंगाउँछौं ।
कांग्रेसले चुनाबको बेला गठबन्धन गरेका दलहरुलाई जोगाउन पनि सकेन । आफु पनि सुरक्षित भएन । कांग्रेसले सरकारबाहिर बस्ने दलहरुको गठबन्धनलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्छ ?
अब काम छैन । डेट एक्सपायर भएकाहरुलाई बोकेर अघि बढिन्न । जनताले खारेज गरेका पुराना विचार बोकेर हिड्नेहरुलाई बोकेर हिँडेर पनि हुन्छ । अब काम छैन । यतातिर नसोचौं ।